Ganzabee Dibaabaa 'Sportswoman' bara 2014 jedhamtee badhaafamte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Ganzabee Dibaabaa ‘Sportswoman’ bara 2014 jedhamtee badhaafamte
Ganzabee Dibaabaa ‘Sportswoman’ bara 2014 jedhamtee badhaafamte
Atleetii Itoophiyaaf injifannoon kuni isa jalqabaati
Sagantaa badhaasaa bara kana Laureus World Sports Awards Shaanghaay, Chaayinatti qopheesse irratti gootittiin atleet Ganzabee Dibaabaa ‘sportswoman’ bara 2014 jedhamtee moggaafamte. Kana jechuun dubartii keessaa gosa ispoortii kamiinuu bara 2014 keessa kan Ganzabee caalaa injifannoo boonsaa galmeessise guutuu addunyaa irra tokko hinjiru jechuudha. Waan gaarii!
Badhaasa kana ramaddiin kamiinuu atleetiin Itoophiyaa hanga ammaatti injifate tokko hinjiru. Ganzabeen seenaa keessatti isii jalqabaati. Badhaasni kuni bara 2000 eegale.
Ganzabeen badhaasa kana argachuu kan dandeette bara 2014 fiigicha mana keessaa mt1500 fi mt3000 rikoordii harkatti galfachuu isiitiif. Akkasumas fiigicha dirree irraatiinis Ganzabeen mt5000, mt2000 fi mt3000 injifannoo gurguddaa galmeessistee jirti; baruma 2014 keessa.
Gama worraa dhiraatiin moggaasa ‘sportsman’ bara 2014 kan gonfate Noovaak Jokovich. Noovaak taphataa teenisii yeroo ammaa addunyaa irratti sadarkaa 1ffaa irratti argamuudha.
Injifannoon kuni hunda keenyaaf boonsaadha. Ganzabee, maatiifi jaallattoota ispoortii biyya keenyaa hundaan baga gammaddan jenna.
badhaasa ganzabee dibaabaa
Previous articleThe Guardian: Ethiopians talk of violent intimidation as their land is earmarked for foreign investors
Next articleForeign Policy: Ethiopia’s Economic Miracle Is Running Out of Steam